प्रकाशराज शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन । विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई जीवीकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपालमा लघुवित्तको अवधारण भित्रिएको थियो । यद्यपि, अहिले लघुवित्तहरु विकसित भइसकेका छन् । लघुवित्तहरु अब जीवीकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कुरामा मात्र सीमित नभएर परियोजना, उद्यमशीलता लगायतमा …
ध्रुव तिमल्सिना, अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर्स संघ । पुँजी बजार वित्तीय क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण अंग हो । विश्वका कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि पुँजी बजारको उपयोग हुने गर्दछ । अहिले नेपाल ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट अघि बढिरहेको अवस्थामा विकास निर्माणका लागि स्रोत …
सुरज घिमिरे । एकथरि अर्थशास्त्रीहरु ज्ञान अर्थतन्त्रलाई कृषि युग (भूमिमा आधारित) र औद्योगिक युग (पूँजी र श्रममा आधारित) पछिको विश्व्यापी आर्थिक विकासको नयाँ युगको रुपमा मान्दछन् भने अर्र्काेथरि अर्थशास्त्रीहरु यसलाई विश्वव्यापीकरण तथा प्राविधिक विकाससँगै आएको एक नविन प्राविधिक शब्दको रुपमा …
अरबिन अर्याल । समय समयमा प्रकाशित हुने नियमन निकाय तथा स्वतन्त्र विश्लेषकका समग्र तथ्याङ्कहरुले देशको आर्थिक गतिबिधि राम्रो देखाएपनि पछिल्ला महिनाहरुमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्षिण भएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । दिनानुदिन पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण समाग्रीको मुल्यमा भएको वृद्धिले आगामी …
रमेश कुमार पोखरेल । व्याज एकातिर उपभोग स्थगन गरी बचत गरे बापतको पुरस्कार हो भने अर्कोतिर पुँजी उपयोग गरेबापतको मूल्य हो । मुद्राको मूल्यमा ह्रास आएबापतको क्षतिपूर्ति हो । वित्तीय मध्यस्थता र जोखिमको मूल्य हो । व्याजदर अर्थतन्त्रको परिसुचक हो …
सुरज सापकोटा । आजको समयमा कुनै पनि देश वैदेशिक ब्यापारविना आफु स्वयम् धानिन सक्दैन । दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरुको वस्तु तथा सेवाको विनिमय गर्न प्रक्रियालाई वैदेशिक ब्यापार भनिन्छ । विश्वको एउटा कुनामा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवा अर्को …
‘वित्तीय चेतनाबिना पैसा कमाउन सकिन्न’
डा. चिरंजीबि नेपाल, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक । हाल नेपालमा बैंकिङ सेवा सीमित व्यक्तिहरुले मात्रै लिरहेका छन् । किनकि बैंकसम्मको पहुँच सीमित व्यक्तिहरुसँग मात्रै भइरहेको छ । थोरैले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको महत्वका बारेमा बुझेका छन् । …
सुरज घिमिरे । एक दिन एक पुस्तक पसलमा ग्राहक आयो । केही क्षण पुस्तक हेरिसकेपछि पसलको कर्मचारीसँग सोध्यो–“यो पुस्तकको मूल्य कति हो ?” “एक डलर ।” “केही कम हुन सक्दैन?” “अहँ सक्दैन ।” ग्राहकले केहीबेर अरु पुस्तक हेर्यो । अनि …
सुदिप कुमार शाही । केहि समय पहिले एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको स्विफ्ट हयाक भई करिब ४५ करोड रुपैया बिदेशस्थित कुनै बैंकमा स्थानान्तरण भएको थियो । स्विफ्ट एक स्वतन्त्र संस्था हो, जसमा बिश्वका करिब एघार हजार भन्दा बढि बैंक तथा बित्तीय …
विकास बैंकहरुको चुनौती : तरलता र प्रतिष्पर्धा
गोविन्द प्रसाद ढकाल, बैंकर्स, पुँजीबृद्धिको नीतिले विकास बैंकहरु मर्जरमा गइरहेको हुँदा संख्यात्मक ढंगबाट घट्दो क्रममा रहेका छन् । तर शाखा संजालका हिसाबबाट वा विस्तारीत अबस्थाबाट हेर्ने हो भने विकसित र मजबुत भइरहेका छन् । विकास बैंकका चुनौतीहरु विकास बैंकहरुको चुनौती …
अर्जुन बहादुर पाठक – नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७२।७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी चार गुणासम्म बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि तीन आर्थिक बर्षहरुमा वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र करिब एक खर्ब बाह्र अर्ब रुपयाँ बराबरको पूँजी थपिएको छ । …
गत बर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रह्यो । त्यो भन्दा पहिलेको वृद्धिदर हेर्ने हो भने करिब–करिब शून्यमा पुगिसकेको थियो । अन्य कमजोर आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा धेरै राम्रो प्रगती भएको मानिन्छ । विभिन्न कारणले इस्तो भए होला …